Maxay tahay sababta uu hakadka ugu jiro daabicista Baasaboorka Somaliga? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Maxay tahay sababta uu hakadka ugu jiro daabicista Baasaboorka Somaliga?
Iyadoo uu hakad ku jiro bixinta Baasaboorka Somaliga oo dadka si wayn uga cabanayaan muddooyinkii dambe, ayaa sababta keentay inuu hakad ku yimaado baasaboorka waxa ay tahay arrimo la xiriira Shirkadda Daabacda Baasaboorada Somaliya.
Shirkadda Daabacda Baasaboorada Somaliga ayaa horay qandaraas heshiis ah waxaa ula galay dowladii ka horeysay midda hadda jirta, waxaana heshiiskaasi uu noqday mid waqtigeeda uu dhamaaday, kadibna waxaa jiray Khilaaf ka dhashay cusbooneysiinta heshiiska.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in Saraakiisha Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadaha dowladda Federalka Somaliya ay doonayaan inay ka wareegsadaan Shirkadda heshiiska lagula galay daabicista Baasaboorka Somaliga oo ay doonayaan inay u wareegsadaan Shirkado kale.
Arrinta ugu wayn ee muranka hakadka Daabacaada Baasaboorka dhalisay ayaa ah in Masuuliyiinta Hay’adda Socdaalka ay doonayaan in hal sano u kordhiyaan Shirkadda, halka Shirkadana ay ku doodeyso heshiis Shan sano ah in la siiyo si ay u sii wado hawsha waana arrinta ugu wayn ee hakadka ku keentay daabicista Baasaboorka Somaliga.
Bulsho badan ayaa subax waliba waxa ay ku jarmaadaan Xarunta Hay’adda Socdaalka Iyo Jinsiyadaha oo ah goobta laga qaato Baasaboorka Somaliga, halkaasi oo loogu sheego balamo been ah oo ay dadka dhibsadeen.
Qaar ka mid ah dadka subax kasta u jarmaada Xaruntan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan balamaha kala duwan ee loogu qabto Xarunta Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadaha oo ay ka qaadan lahaayeen Baasaboorka Somaliga.
Masuuliyiinta Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadaha Somaliya ayaanan bulshada la wadaagin faah faahinta rasmiga ah ee ku xayndaaban sababaha uu hakadka ugu jiro Baasaboorka Somaliga oo dadka qaadashadiisa u mihiim ah, marka la eego safarada deg dega ee dhanka Caafimaadka ee Bulshada ay u baxayaan iyo arrimaha kale ee u gaarka ah.